Ny PsyOp 'fanam-pandrosoana lalina' noho ny fanesorana ny fahafahanao sy ny fampidirana 'polisy' eritreritra (part 3): Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 22 Oktobra 2019	• 10 Comments
Fianakaviana, rainy, matoatoa lahy. Tsy ho ela dia ho hita ao amin'ny zaridaina matoatoa ny matoatoa, satria ny tantara matoatoa dia tsy maintsy mijanona ho mampientam-po sy "mahatoky". PsyOp iray mampiditra ny fisainan'ny polisy eritreritr'i George Orwell ary afaka mijery ao ambadiky ny varavarana rehetra tsy misy karatra fikarohana. Mipetraka ao an-tsainao isan'andro ny tantara avy amin'i De Telegraaf; ny gazety izay nanohana ny fitondrana ihany koa izay nanafika tamin'ny '40 /' 45. Ary mbola miverina anio ny lalàna fanafihana.
Ny lalàna manafika dia ho avy tsy ho ela amin'ny voalohany Peacock mivantana mikasika ity tantara matoatoa ity. Ny Janny Knol, lefitry ny polisy lefitra (tsy fantatra anarana) dia nilaza tamiko fa teo amin'ny toeram-piompiana matoatoa va ny polisy satria tsy misy ahiahy ny fisian'ny fambolena ahitra. Saingy, hoy izy, tsy afaka mijery anatiny ny polisy, satria tsy navelan'izy ireo niditra ny rainy. Efa hainao fa misy lalàna vaovao miasa eo izay tokony hanaisotra ny sakana hijery eo ambadiky ny varavarana fidirana, noho izany dia hamorona toerana hisian'ny fanafihana ihany koa isika amin'izao fotoana izao. Ireo fiandohan'ny boribory izay azo anaovana ireo hevitra rehetra mamitaka.
"Ah, Vrijland, tsy ho lavitra lavitra ve ianao? Tsy adala kely ve ianao?"Efa nametraka fanontaniana mitovy amin'ny momba ny tatitry ny media ve ianao? Moa ve ianao mitsikera ny mpitantana ny fijerena karama be sy karama ary karama be dia be, eny, an-tendron'ny vahiny vahiny; karazana toa an'i Jeroen Pauw? "Eny, tena manakiana be mihitsy aza izy ireo!”Eny, manao lalana amin'ny fanelingelenana anao amin'ny lainga lehibe izy ireo ary manohy ny tantara fototra. Tsy mbola fantatrao ve izany? Ity tantara iray manontolo ity dia mety tsy mihoatra ny fandidiana ara-tsaina (PsyOp) ihany, toy ny part 1, part 2 en part 3 ny lahatsoratro. Mety tsara raha mamaky ireo lahatsoratra ireo ianao ary mizara, ka tsy misy afaka hiteny hoe:Naniry ny rahalahin'i Wir haben es".
Ry zazalahy Spooky Jan, fantatrao fa io zanaka lahy io izay nandondohany ny volom-borona 5 mba hanaitra fanairana lehibe momba ny "famotsoran-keloka tsy misy fanarahan-dalàna" ataon'ny raim-pianakaviana, ankehitriny dia mitana ny toeran'ny fametrahana ny fandaharam-potoanan'ny LGBTI amin'ny sarintany. Satria manana lohahevitra manan-danja avy hatrany isika, izay homen'ny fanjakana anao amin'ny manaraka ny toe-tsaina mety hanipy ao amin'ny sela ny fandinihana. Ohatra, raha manana fanoherana ny fampielezankevitra LGBTI any amin'ny sekoly ambaratonga voalohany ianao dia hanjary hifandray amin'ilay raim-pianakaviana avy amin'ity tantara matoatoa ity ianao. Na izany aza, nalainy ny zanany tany an-tsekoly ary natao ho an'ny lehilahy sy vehivavy izy. Mazava izany avy amin'ireo horonantsary lalina nataony, hoy i De Telegraaf:
Mazava avy ao amin'ireo toriteny nataon'i Gerrit Jan van D. ny fahitana azy momba ny fifandraisana salama. Araka ny baikon’Andriamanitra dia tokony hiditra amina vehivavy iray ny lehilahy iray. Raha tsy manao an'izany ianao dia ao anaty 'fitiavana maloto', avy eo dia mijoro ara-panahy hatrany amin'ny ankihibenanao ao anaty 'rano fantsom-baravarana », hoy i Van D., tao anatin'ny iray amin'ireo toriteniny.
Izy io dia hendry sy mandroso be fandaharana izay ambarantsika. Dada Gerrit Jan (izay 'rain'ny matoatoa') dia manana 'fijery matoatoa' ary toa manana zavatra hanoherana ny lahy. Ary izany dia mazava ho azy fa io no nahatonga ny zanany lahy Jan, izay nanonofy ny hitsoaka any Canada (na efa tao izy io, tsy mazava izany, satria tsy misy mazava). Ny sary PsyOp dia esorina fa ny ray no te-hanabe ny ankizy amin'ny fomba tsy misy dikany ary avelao i Jan manambady lahy. Tian'i Jan ny handositra ny fitondrana "John Eagle", izany no sary. Angamba nifankatia izy tamin'ilay bartender tany Ruinerwold. Io mpanao bartender io izay nanampy azy niantso ny polisy.
Vonona ny vahoaka ho vonona amin'ny fampidirana ny polisy eritreritr'i George Orwell. Vitsy ny Holandey hanohitra izany. Raha ny tena izy, maro no hahita tsara fa ny olona manana hevi-diso, ohatra heteronormativity (ny heterosexual as the norm) dia ny fiheverana hidirina ao amin'ny toby fanabeazana indray (ny fikarakarana GGZ fikarakarana). Ary ho an'io dia tena mora be tokoa fa tsy mila valin'ny karoka ny polisy fa afaka miditra fotsiny. Voalazan'i Dada Gerrit Jan fa nitondra ny zanany tao amin'ny vondrona an-trano ny zanany satria hanaraka ny fitsipiky ny fanjakana izy ireo. Hita angamba izany fa nampianarina ny LGBTI ny zanany ary tsy nanaiky izany. Ka raha amin'ny ho avy no hitanao fa tsy mety dia ny zanakao ao amin'ny sekoly ambaratonga voalohany dia tokony hihaino ny mpanjakavavy dragona milaza azy ireo fa tsy zazalahy na zazavavy izy ireo, fa mbola afaka mifidy ny lahy sy ny vavy izy ireo ary milaza zavatra momba izany, avy eo ianao mety ho mpanohitra. Ity fianakaviana matoatoa ity dia avy eo nikarakara ny tantaran'ny PsyOp matoatoa.
Hitantsika eo ny fanomanana lalàna fanafihana, saingy satria tsy antsoina intsony ary satria ampidirina amin'ny fomba fiasa ara-tsaina ny olona, ​​dia tsy hisy hanohitra ny fampidirana an'ity polisy mieritreritra ity sy ireo fomba fanenjehana azy.
Rehefa mieritreritra an'i Holland aho dia mahita renirano midadoka miadana ao anaty lemaka tsy manam-petra, andalana izay tsy voatanisa ho an'ny elakelaka mijoro toy ny volom-borona avo amin'ny farany; ary any amin'ny faritra midadasika dia mihamalalaka manerana ny firenena, vondrona hazo, vohitra, tilikambo truncated, fiangonana ary elms amin'ny toe-javatra lehibe. mihantona ny rivotra ary mihosona tsikelikely amin'ny masoandro ny rivotra mafana, ary ny feon'ny Telegraaf dia feon'ny feo ary re fa tsy mitsikera.
Lisitry ny rohy loharano: npostart.nl, assercourant.nl
Tags: 1984, fahafatesana, Eagle, Featured, nieritreritra polisy, nieritreritra polisy, George, hita, Janny Knol, John, hetsika, Orwell, ara-tsaina, psyop, fanafihana, fanafihana, razzia0 lalàna, lalàna mifandimby, Ruinerwold, fianakaviana matoatoa, reny reny, raim-pianakaviana, zanakalahy matoatoa, tsy hita
23 Oktobra 2019 ao amin'ny 22: 36
Ao amin'ny toe-javatra hafahafa sy spooky
Ilay mistery hafahafa manodidina ny antsoina hoe vonoan'olona roa? hatramin'ny nisamborana olona iray voasambotra
noho ny fihaonana tamina vatana roa tsy maty aina tao amin'ny Martin Luther KingLaan any Diemen.
Inona no fanontaniana lojika, nahoana no hitan'izy ireo hoe iza ary ahoana? , mijanona ao daholo ny zava-drehetra amin'ny sehatra tsy fantatra, spooky, an-trano.
Toa eo amin'ny fizarana fizarana efa-toko efatra izy, kely ny NL.
Tsy nanokatra ny varavarana itony intsony ilay olona ary nahoana no tsy nisy fiara mpamonjy voina intsony, rehefa avy tao ry zareo !!! hanenina ny maty, resahina ary fanontaniana maro ...
24 Oktobra 2019 ao amin'ny 21: 42
Eny, eny ve izao fotoana izao ho an'ny hafatra vaovao ao amin'ny Telegraaf .. izy ireo ve hanambina ny fandaharam-potoanan'ny Facebook?
Napetraka tsara ilay script:
(maimaimpoana vakiana amin'ny fomba mode Incognito amin'ny browser Google Chrome)
Mino aho fa ny antsasaky ny fiangonana any Holandy dia mino ny anjely sy ny demonia. Raha ny marina dia olona an'arivony tapitrisa eo amin'izao tontolo izao no mino ny anjely, ny demony na ny jinns (araka ny finoana silamo).
Izany dia nilaza fa miandry ny fandaharana Pauw manaraka isika izay hanaovan'ny manam-pahaizana iray momba ny kolotsaina ny maha-tsy manam-paharoa ny hevitra nataon'i John Eagle!
Nankaiza i Peter R. amin'ity tantara ity? Eny, eny, mazava ho azy no hiantsoana raha hatao ny fitiliana ny ADN ho an'ny reny matoatoa hita! (saingy hevitra fotsiny ihany ny ho tohin'ny andian-tsoratra)
Keyboarde nanoratra hoe:
28 Oktobra 2019 ao amin'ny 13: 39
Iriko ny fehin-kevitra nataoko taorian'ny famakiana ireo lahatsoratra vao haingana tao amin'ity tranokala ity:
Tokony ho fantatsika rehetra fa tsy azo esorina amintsika ireto zo manaraka ireto, satria ireo zo sy androngo dia mitady loza sy fahefana bebe kokoa:
- zon'ny mandà ny fikarohana trano raha tsy misy ny didim-pitsarana
- zo amin'ny safidy amin'ny fampianarana any an-trano (mety eo amin'ny fepetra sasany)
- zahana ny mandà vaksiny
- ny zo amin'ny fiarovan-tena
- zon'ny mpamorona sarimihetsika eo am-perinasa raha toa ka tsy manelingelina azy ireo amin'ny asany
28 Oktobra 2019 ao amin'ny 13: 48
Fa ambonin'izany rehetra izany: ny zo 'hieritreritra izay tianao'
Ny fampidirana ny polisy mieritreritra.
Tsarovy fa nino ny "matoatoa ity" ilay lehilahy. Manodidina ny 5 miliara olona eto amin'izao tontolo izao no manao an'izany. Ireo Kristiana ao amin'ny anjely sy ny demony, ny silamo dia mitsoaka ary ireo kristiana evanjelistika dia mino fa nandefa ny Fanahiny Masina ny Tompo tamin'ny Pentekosta. Noho izany dia manana fialantsasatra Whitsun isika.
28 Oktobra 2019 ao amin'ny 15: 31
Misaotra ny fanampiny dia tonga hatrany an'izany.
Ny olon-drehetra dia manan-jo hisaina / mino ny zavatra tadiaviny, sy manana zo hanao asa mifanaraka amin'izany, raha mbola tsy fanitsakitsahana ny zo sy ny fahafahan'ny hafa izany.
Ny lojiky ny fitondran-tena dia tsy sarotra amin'ny fisainana olona ary tsy voatery hifanaraka ianareo amin'ny tsipiriany.
28 Oktobra 2019 ao amin'ny 15: 42
Ary raha ny filazam-baovao ihany, dia mampihomehy hoe hatraiza ny habaka / an-tsipiriany momba ny tatitra momba izany, ary izany dia midika fa tanjona fototra. Na izany fikasana izany dia ny hampientana ireo olona miasa mafy amin'ny ora hariva, na hanentanana ny fanovana amin'ny lalàna, tsy misy dikany. Ny zava-misy dia mijanona fa tsy maintsy miaro ny zontsika ary miady hevitra momba izany ianao dia heveriko fa zavatra tsara izany.
28 Oktobra 2019 ao amin'ny 21: 24
jereo fa voavaha io, tsy mila olona matotra io. Makà fizaha toetra fotsiny….
29 Oktobra 2019 ao amin'ny 10: 51
Fihetsika manokana tato ho ato. Ankehitriny, taorian'ny raharaha Anne Faber, nahazo andraikitra roa ihany koa ilay mpitsara amin'ny maha-psikology. Ny orinasam-barotra dia atolotra andraikitra roa miaraka amin'ny polisy ...
1 Novambra 2019 ao amin'ny 23: 49
Neny tsy nalevina i Neny van Ruinerwold, fa nafenina mangingina araka ny Telegraaf, tamin'ny alàlan'ny
Araka ny telegrama
Ny crematorium dia mamoaka rakitra manokana, inona no tokony hataonay?
dikan'ny. Tsy nalevina ny renim-pianakaviana fa araka ny bola kristaly an'ny Telegraaf.
Tsy halevina eny an-jaridaina fa aorina miaraka amin'ny antsoina hoe "faile manokana".
Tsy mahazo mitondra antsipirihany isika, fa?
2 Novambra 2019 ao amin'ny 13: 58
Ny olona manana fijery kristiana momba ny fiainana dia tsy matetika no mandre satria noho ny finoana ny ‘mi-atsinanana».
Saingy novakiany niaraka tamin'ity, ka miandry ny manaraka spin ..
« Ny PsyOp 'fanam-pinoana lalina' noho ny nanesoranao ny fahafahanao sy ny fampidirana 'polisy' eritreritra (part 2)
Ny mpampihorohoro sainam-pirenena diso dia manafika an'i London, Manchester, Paris, Barcelona ary Rotterdam amin'ny 23 sy 24 Oktobra? (VAOVAO)) »
Total visits: 13.941.796